အရည်အသွေးမြင့်မား3အဆင့် Beverage သာသနာဖျော်ရည်သာသနာ, လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်သာသနာ
3 အဆင့် Beverage သာသနာ, ဖျော်ရည်သာသနာ
သင့်ရဲ့ဘားတန်းထိပ်ဆုံးသို့မဟုတ်ဘူဖေးစားပွဲပေါ်တွင်အာကာသအသေးအဖွဲစဉ်ဤ3အဆင့် Beverage သာသနာ, အချိုရည်တစ်ရွေးချယ်ရေး်ထမ်းဆောင်ဘို့စုံလင်သည်။
♦3တစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းစီအလွှာများအတွက်ဘုံဘိုင် dispensing
♦ကျွန်ုပ်တို့၏အဖျော်ယမကာသာသနာအသီးအသီးအရည်တစ်ဦးဂါလံအထိကိုင်ထားနိုင်သည့်သုံးအလွှာရှိပြီး; သင်အစဉ်အဆက်စဉ်းစားနိုင်ဘာမှ ... လင်မနစ်, လာကြတယ်, iced လက်ဖက်ရည်နှင့်ထို့ထက် ပို. နှင့်အတူကဖြည့်နိုင်ပါတယ်
ဤသည်3အဆင့် Beverage သာသနာမင်္ဂလာဆောင်, ဘူဖေးနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်, ဒီပေါင်းစုံဆင့်အဖျော်ယမကာသာသနာကိုလည်းအလွယ်တကူ diluting မရှိဘဲအေးအဘို့ကိုထိပုတ်ပါနှင့်ရေခဲသိုလှောင်မှုအခြေစိုက်စခန်းလောင်းပါရှိပါတယ်။
ဒါဟာလွယ်ကူတဲ့ re-ဖြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်; တစ်ဦးချင်းစီအလွှာသီးခြားစီနဲ့အလွယ်တကူဖြည့်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီအလွှာလည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးချင်းစီသာသနာကိုထိပုတ်ပါရှိပါတယျ။
3 ဂါလံ / 12L
100% အစားအစာတန်း acrylic
အဆိုပါ Beverage သာသနာ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြန်ကြားရေး:
ရှိရှိကွှေးကျွော3ဂါလန်ကျင်းပရန်သုံးနိုင်; သာသနာများအတွက်မယို, လွယ်ကူတဲ့ဆွဲမျိုးတွင်ပါရှိပါတယ်။ အပိုဆောင်းအအေးများအတွက်ရေခဲနှင့်ပြည့်စုံမည်နိုငျသော compartmentalized အခြေစိုက်စခန်း Features; လည်းကျယ်ပြန့်ပါးစပ်နှင့်ဖြုတ်အဖုံးပါရှိပါတယ်။ လက်ကိုင်ကပိုရေခဲ, အသီး, ဒါမှမဟုတ်ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်ထည့်သွင်းဘို့ပယ်ရုတ်သိမ်းပေးရန်ရန်လွယ်ကူစေသည်; ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံသို့မဟုတ်အသစ်အိမ်ပိုင်ရှင်အဘို့ကြီးစွာသောဆုကြေးဇူးကိုမှန်ကန်စေသည်
ရေခဲပြင် core ကို:
ရေခဲပြင် core ကိုသင်အကြိုက်ဆုံးအချိုရည်အအေးများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖျော်ယမကာသာသနာအသီးအသီးအရည်တစ်ဦးဂါလံအထိကိုင်ထားနိုင်သည့်သုံးအလွှာရှိပြီး; သင်အစဉ်အဆက်စဉ်းစားနိုင်ဘာမှ ... လင်မနစ်, လာကြတယ်, iced လက်ဖက်ရည်နှင့်ထို့ထက် ပို. နှင့်အတူကဖြည့်နိုင်ပါတယ်
ဤသည် 3-အဆင့် Beverage သာသနာတစ်ကြော့ stackable ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်; တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အသွားအလာ၏ ontop တစ်ခုချင်းစီကိုဆင့်သီးနှံများကိုပုံနှင့်အသငျသညျမကျြစိမှဆွဲဆောင်သောကျစ်လစ်သိပ်သည်းအဖျော်ယမကာသာသနာနှင့်အတူထွက်ခွာနေကြသည်။
ရုံလက်ကိုင်နှင့်အတူထိပ်တန်းချွတ်ရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့်မျှ-ယိုသာသနာများအတွက်လွယ်ကူသောဆွဲမျိုးတွင်သင်အကြိုက်ဆုံးအဖျော်ယမကာ, ရေခဲ, အသီးသို့မဟုတ် sweeteners.Features ထည့်ပါ။ ပါတီများသို့မဟုတ်နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းအဘို့ကြီးသော။
သင့်ရဲ့ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရန် 2.Great နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဤသည်သင်နှင့်သင့်မိသားစုဓါတ်ကိုပြန်လည်သောက်သုံးလန်းဆန်းအသီးထုံမွှန်းရေနေဖို့အဘို့ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏သားသမီးတို့သည်မြင့်မားသောသကြားအချိုရည်တစ်ဦးအကြီးအကအခြားရွေးချယ်စရာင် too.it ကခစျြလိမျ့မညျ။
ပြုတ်ရည်နှင့်အတူပလတ်စတစ်2ဂါလန်အဖျော်ယမကာသာသနာ
အအေးဆိုဒါအဘို့အပြုတ်ရည်များနှင့်ရေခဲစုံလင်သောနဲ့အတူပြုတ်ရည်-အချိုရည်သာသနာနှင့်အတူပလတ်စတစ်2ဂါလန်အဖျော်ယမကာသာသနာ ......
3-layer ကို Beverage သာသနာ, ဖျော်ရည်သာသနာ
အအေးဆိုဒါအဖျော်ယမကာ, အချိုရည်, ဖျော်ရည်များအတွက်ပြုတ်ရည်များနှင့်ရေခဲစုံလင်သောအတူ 3-layer ကို Beverage သာသနာ -Drinks သာသနာ ......
3 အဆင့် Beverage သာသနာ, ဖျော်ရည်သာသနာဒီ3အဆင့် Beverage သာသနာတစ်ဦးအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဘို့ပြီးပြည့်စုံ ......
2 အဆင့် Beverage သာသနာ, ဖျော်ရည်သာသနာ
2 အဆင့် Beverage သာသနာ, ဖျော်ရည်သာသနာဒီ2အဆင့် Beverage သာသနာတက်ကိုင်နိုင်သည့်နှစ်ခုအလွှာရှိပါတယ် ......
2 ဂါလန် Beverage သာသနာသစ်သီးဖျော်ရည်သာသနာ
2 ဂါလန် Beverage သာသနာသစ်သီးဖျော်ရည်သာသနာအသီးအပွနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သဘာဝအရသာရေ Create ......